मानव निर्मित यन्त्र र कम्प्युटर प्रोग्राम हो रोबोट, कसरी सुरु भयो रोबोट प्रबिधि ? - Kanchanjangha Online
मानव निर्मित यन्त्र र कम्प्युटर प्रोग्राम हो रोबोट, कसरी सुरु भयो रोबोट प्रबिधि ?
काठमाडौं । रोबोट एक प्रकारको मानव निर्मित यन्त्र र कम्प्युटर प्रोग्राम हो, यसलाई हेर्दा लाग्छ यो यन्त्र भित्र पनि जीवन छ। रोबोटको निर्माण विभिन्न प्रकारको काम गराउनको लागि गरिन्छ । यसभित्र मानिसहरु संग दोहोरो संबाद गर्न सक्ने प्रोग्राम राखिएको हुन्छ ।
रोबोटहरु हिड्न सक्छन् ,आँखाले वस्तुलाई स्क्यान गरेर हेर्न सक्छन् । अनेक प्रकारका शारीरिक हलचल गर्न सक्छन् ।अहिलेका आधुनिक ह्युमोमोइड रोबोटहरुले भने मानिसले गर्न नसक्ने जटिल कार्यहरु समेत गर्न सक्छन् । प्राचिनकालमा रोबोटलाई रोबोट भन्ने चलन थिएन र सबैभन्दा पहिले रोबोट शब्दको प्रयोग १९२१ मा ’चेकमा रोसमको युनिभर्सल रोबट्स ’(rossums universal roberts) नामक नाटकमा प्रयोग गरिएको थियो । रोबोटको मतलब चेक भाषामा कठिन परिश्रम अथवा मजदुर भन्ने बुझाउँछ । उक्त नाटकका लेखक केरेल केपेकले रोबोट शब्द प्रचलनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि यो शब्द विश्वभरमा व्यापक प्रयोगमा आएको थियो ।
तत्पश्चात् अलेक्जेन्ड्रीयाका हिरोले वाफबाट चल्ने धेरै स्वचालित यन्त्रहरुको निर्माण गरे । यसपछि दशौ शताब्दितिर चीनमा सु(सोंगले एउटा घण्टाघरको निर्माण गरे जहाँ एउटा यान्त्रिक मुर्तिले हरेक घंटामा घन्टी बजाउने काम गर्दथ्यो । रोबोटहरु मानव आकृतिको जस्तो मात्र नभएर जनावर जस्तो र अन्य कुनै बस्तुको आकारमा पनि बनिएका छन् ।
ती रोबोटहरु बस्न तथा हिडडुल गर्न र हात चलाउन सक्छन् ,यिनीहरुको टाउको र अनुहार समेत चल्छ । यस पछि सत्रौं शताब्दीमा यस्ता धेरै आकार र प्रकारका स्वचालित रोबोटहरुका निर्माण भए र ती रोबोटहरुले चित्र बनाउने,उड्ने तथा संगीत बजाउने देखि लिएर मानिसले गर्ने धेरै प्रकारका जटिल कामहरु गर्न सक्दथे । जापानी शिल्पकार हिसशिगे तानाका जसलाई जापानका एडीसनको रुपमा समेत चिनिन्छ,उनले एकदमै जटिल मेकानिकल खेलौनाहरु बनाएका थिए । ती मध्ये केहिले चिया बाड्ने तथा तिर हान्न सक्ने थिए भने केहि जापानी कान्जीका चरित्रहरु पनि थिए ।
आज विश्वसनीयताका साथ काम गर्ने बाणिज्य तथा औधोगिक रोबोटहरु व्यापक रुपमा सहज मुल्यमा उपलब्ध छन् र प्रयोगमा आइरहेका छन् । यसबाहेक नराम्रा र मानव जातिलाई बेफाइदा पुर्याउने कामका लागि पनि रोबोटहरूको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । ह्युमोनोइड रोबोटको प्रयोग यातायात, पृथ्वी र अन्तरिक्षको खोज,सर्जरी,हतियारको निर्माण, प्रयोगशाला अनुसंधान र उपभोक्ता र औधोगिक उत्पादनको लागि गरिंदै आइएको छ ।- livingwithict.com साभार
« मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकियो (Previous News)
(Next News) पाँचथरमा प्रहरी जवानद्वारा आत्महत्या »
सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरक्रिया
पल्सर र अपाचेलाई मात खुवाउने गरि यामाहाले ल्याउदै छ यस्तो नेकेड बाइक !
सामसङको जे- २ २०१८ मोबाइल बजारमा मूल्य १४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ